ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကြီး မှာ သီလရှင်များ ထဲမှ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမဖြင့် အဂ္ဂမဟာအေ ကျာ်ဘွဲ့တံဆိပ် ဆွတ်ခူးသွား နိုင်ခဲ့တဲ့ သီလရှင် ဆရာလေး – Shwe Naung
ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ ကြီး မှာ သီလရှင်များ ထဲမှ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမဖြင့် အဂ္ဂမဟာအေ ကျာ်ဘွဲ့တံဆိပ် ဆွတ်ခူးသွား နိုင်ခဲ့တဲ့ သီလရှင် ဆရာလေး
Shwe Thuta | November 19, 2020 | Local News | No Comments
ယခုနှစ် ရဲ့ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲ ကြီးမှာ သီလရှင် များထဲမှ မြန်မာတစ်နို င်ငံလုံးပထမဖြင့် အဂ္ဂမဟာအေ ကျာ် ဘွဲ့တံဆိပ် ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့သော မဣန္ဒဝတီယခု နှစ်ရဲ့ ဓမ္မာ စရိယ စာမေးပွဲ ကြီးမှာ သီလရှင် များထဲမှ မြန် မာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပထမဖြင့် အဂ္ဂမဟာ အကျော် ဘွဲ့တံဆိပ် ဆွတ် ခူး ရရှိခဲ့သော မဣန္ဒဝတီ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲ ကြီးမှာ သီလရှင်များထဲက ပထမဆုရကာ အဂ္ဂမဟာ အကျော်ဘွဲ့ကို
အဂ္ဂမဟာအေ ကျာ်ဘွဲ့တံဆိပ် ဆွတ်ခူးသွား နိုင်ခဲ့တဲ့ သီလရှင် ဆရာလေး
ဆွတ်ခူး ရရှိသူ သီလရှင် ကတော့ မုံရွာ သာသနမဉ္ဇူ ယင်းမာမြိုင် သီလရှင်စာသင် တိုက်မှဒေါ်ဟေ မာရီ၏ တပည့် ဒီပဲယင်း ပေါင်းတော်ကူဇာတိဖွား မဣန္ဒဝတီ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံများရဖို့ ကူညီပေးပါသော ဆရာဘဒ်နဲ့ မောင်ခေ မာတို့အား အထူး ကျေးဇူး တင်ကြော င်းပြောကြားလိုက် ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြသော ပရိ တ်သတ်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ယခုႏွစ္ ရဲ႕ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲ ႀကီးမွာ သီလရွင္ မ်ားထဲမွ ျမန္မာတစ္နို င္ငံလုံးပထမျဖင့္ အဂၢမဟာအေ က်ာ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ေသာ မဣႏၵဝတီယခု ႏွစ္ရဲ႕ ဓမၼာ စရိယ စာေမးပြဲ ႀကီးမွာ သီလရွင္ မ်ားထဲမွ ျမန္ မာ တစ္နိုင္ငံလုံး ပထမျဖင့္ အဂၢမဟာ အေက်ာ္ ဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆြတ္ ခူး ရရွိခဲ့ေသာ မဣႏၵဝတီ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲ ႀကီးမွာ သီလရွင္မ်ားထဲက ပထမဆုရကာ အဂၢမဟာ အေက်ာ္ဘြဲ႕ကို
ဆြတ္ခူး ရရွိသူ သီလရွင္ ကေတာ့ မုံ႐ြာ သာသနမၪၨဴ ယင္းမာၿမိဳင္ သီလရွင္စာသင္ တိုက္မွေဒၚေဟ မာရီ၏ တပည့္ ဒီပဲယင္း ေပါင္းေတာ္ကူဇာတိဖြား မဣႏၵဝတီ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံမ်ားရဖို႔ ကူညီေပးပါေသာ ဆရာဘဒ္နဲ႕ ေမာင္ေခ မာတို႔အား အထူး ေက်းဇူး တင္ေၾကာ င္းေျပာၾကားလိုက္ ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကေသာ ပရိ တ္သတ္ႀကီးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္။
နိုဝင်ဘာ လကုန်မှ စကာ Stay home သတ်မှတ်ခြင်း မရှိသော မြို့နယ်များတွင် စားသောက်ဆိုင်နှင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုမည် ဟုဆို
အရမ်း လေးစား ဖို့ကောင်းတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါ စတော်ဘယ်ရီ တွေ တခြင်းငါးရာ တခြင်းငါးရာဆို ပီးယူနီ ဖောင်းကြီးနဲ့ အော်ရောင်း နေလို့ သွားမေးကြည့်တာ….
နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် မှ ထုတ်ဝေထားသည့် ငွေစက္ကူအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူ ၂ ဦးအား ဖော်ထုတ်အရေးယူ
အစိုးရ အစီအစဉ်ဖြင့် RDT Test Kit ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေး ကိရိယာများ ကို တစ်ခုလျှင်ငွေကျပ် 15000 ဖြင့် ကလေးမြို့နယ် တွင် ရောင်းချပေးသွား မည် ဟုဆို
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်အင်ကြင်းကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်Mဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပီး ရလာတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….
ဆက်ဆီကျကျ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အမိုက်စား လှုပ်ခါ ကပြထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး……..
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချော‌ပိုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..